ခင်မင်းဇော်: ဘ၀ဒိုင်ယာရီ အပိုင်း ၂ ၊ အခန်း (၁၁)
ဖတ်ရတာ စိတ်မကောင်းဘူး ။ နန်းနန်းလေး မောင်လေး ကို ခေါင်းကို အုတ်ခဲနဲ့ထုသတ်ခဲ့ တာကို ဖတ်ရတော့ ကျနော့် ခေါင်းတောင် ကျိန်းသွားတယ် ။
ဘယ်အချိန်ထိ လူမဆန်စွာ ရက်စက်နေကြဦးမှာလဲ ။
ဘိုကလေးထော်ပိုင်ဘက်မှာ မိန်းမတွေဖင်ထဲ ၀ါးချွန်နဲ့ ထိုးပြီးထောင်ထားတာ ဗိုက်ကြီးသည်တွေတောင်ပါတယ် စစ်တပ်ကအဲဒီလောက်မိုက်ရိုင်းတယ် အဲဒီတုန်းက တိုင်းမှူးလုပ်သူက လယ်ယာဝန်ကြီး ပြုတ်သွားတဲ့ မြင့်အောင် ခုတော့သေသွားပြီ
ဒီမှာ ထောင်နှစ်ရှည်ကျနေတဲ့ သူတွေထဲက ထောင်ထဲမှာနေရင်း ဘွဲ့လွန်တွေ Phd တွေ ပြီးသွားတဲ့သူတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ ကြားဖူးလို့ အစ်မရေးထားတဲ့ အတွေ့ အကြုံတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မိတယ်။
အင်း..ဒါတွေကိုတော့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး အထဲက မီဒီယာ သတင်းစာထဲမှာ ဖတ်လို့ ရပါ့မလဲ... အစ်မရယ်..တကယ့် အဖြစ်မှန်တွေကို သိရတာ ခါးသီးနားကျည်းစရာကောင်းပါတယ်လေ..
အော်..ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းများ ရက်စက် လုပ်ရက်လိုက်ကြတာ...
အမရေ သင်တန်းက ဘယ်မှာတက်ရမှာလဲ
Zoe Zat said...
မကြည်ကြည်ခင်ရေ. ၉၁ ထောပိုင်အရေးအခင်းအကြောင်း ဟိုတနေ့ကတင် စကားစပ်လို့ ပြောမိကြသေးတယ်။ အခု အမျိုးသမီးထောင်ထဲက အတွေ့အကြုံတွေ အခြေခံပြီး ရေးထားတာ ဖတ်ရတော့. အမျိုးသားထောင်တွေထဲက အတွေ့အကြုံတွေအခြေခံပြီး ရေးမယ့်သူ ထပ်ရှိရင်ကောင်းဦးမှာပဲလို့ ဆန္ဒဖြစ်မိတယ်။
မ ရေ… စိတ်ဝင်တစားစောင့်ဖတ်နေပါတယ်…